I-TuLotero isungula i-app yayo ekudala ilindelwe kuGoogle Play | Iindaba zeGajethi
I-TuLotero isungula i-app yayo ekudala ilindelwe kuGoogle Play
UMiguel Hernandez | 02/06/2021 10:00 | Ukuhlaziywa ukuba 31/05/2021 11:37 | Izicelo
TuLotero iye yazibeka endaweni yayo ukusukela ekuzalweni kwayo kwi-2014 njengomboneleli ophambili we-intanethi weelottery kwaye izobe eSpain, ke nkqu neenkampani ezinkulu ziye zatshintshela kwifomathi yedijithali yeTuLotero nakwiLottery yeKrisimesi ebanjwa phantse qho ngonyaka.
Isicelo esitsha seTuLotero siphehlelelwe kwiVenkile yokuDlala kuGoogle ukusinika amava apheleleyo aya kukuvumela ukuba ulawule ilothari yakho njengangaphambili. Izinto ezintsha zivelile ngokukhawuleza zibulela kuyilo lwazo oluhle, zibonelela ngamava apheleleyo kwaye enziwa ngabantu ekulawuleni ilotho yethu yonke.
1 Inkqubo ehlaziyiweyo elindelwe ngabasebenzisi
2 Izibonelelo zesicelo seTuLotero
3 Dlala kwiTuLotero kwaye ufumane i- € 1 SIMAHLA
Inkqubo ehlaziyiweyo elindelwe ngabasebenzisi
Isicelo seTuLotero sifumaneka ngokupheleleyo kwiGoogle Play Store yezixhobo ze-Android, apho ekugqibeleni ithatha indawo yenguqulo yeLite yeTuLotero kude kube ngoku ibikhona kwaye inezinto ezinqabileyo kakhulu. Isicelo kuhlobo lwayo lweLite esivunyelwe kuphela ukugcina amatikiti kwaye ubone iziphumo, xa kufuneka ukhuphele i-.APK kwiwebhusayithi yeTuLotero.
Khuphela iTuLotero kuGoogle Play
Ukuba unayo i-iPhone, ikwafumaneka kwiVenkile ye App.
Ngoku ukuziqhelanisa nemigaqo-nkqubo kaGoogle emitsha, I-TuLotero ihlaziyiwe ukubonelela ngohlobo olupheleleyo lwesicelo onokuzikhuphelela simahla, kungekuphela kwiVenkile yeGoogle Play, kodwa ikwafumaneka kwiVenkile yeApple yeApple nakwiGalari yeHuawei.
Ekuqalisweni kwayo, Isicelo seTuLotero sikwazile ukungena kwi-Top 6 yenqanaba lesicelo sehlabathi nakwi-2 ephezulu yolonwabo kwiVenkile yeGoogle Play, ngokwamkelwa okuphezulu ngabasebenzisi abayinike umndilili weenkwenkwezi ezi-4,8 kwezi-5 zinokubakho kwinkqubo yovavanyo kaGoogle, into engqina intsebenzo elungileyo kunye nokudityaniswa okuhle konxibelelwano lomsebenzisi ngoku olunikezela iTuLotero.
Ngale ndlela, ukudityaniswa ngokupheleleyo kwiVenkile yeGoogle Play kunye nezinye iivenkile zesicelo ezidumileyo emhlabeni, Uyakwazi ukufumana uhlaziyo rhoqo kwaye ugcine usetyenziso rhoqo kuhlobo lwamva nje, Oku kuya kuba lukhuseleko olubaluleke kakhulu kunye, yiyo loo nto kwi-Actualidad Gadget sikubongoza ukuba ukhawuleze ukhuphele i-TuLotero kwivenkile oyithandayo yesicelo ukuze ukwazi ukusebenzisa ngokupheleleyo izakhono zokunxibelelana okutsha kunika abasebenzisi beTuLotero.
Izibonelelo zesicelo seTuLotero
Isicelo sisenguhlobo oluhlanganisiweyo lwezakhono ze iwebhusayithi yeTuLotero kodwa idityaniswe ngokupheleleyo entendeni yesandla sakho. Kungenxa yoko le nto ngoku uza kuba nakho ukudlala ngaxeshanye kwifowuni yakho ephathekayo nakwikhompyuter yakho, apho ikulungele ngalo lonke ixesha. Ukongeza, Uyakwazi ukusebenzisa ithuba lokuba isicelo simahla, asinazo iikhomishini kwaye izaziso zokutyhala ziya kukuvumela ukuba wazi iziphumo zemidlalo yakho kwangoko, Ukuba usisityebi ngeTuLotero uyakuyazi ngaphambi kwakhe nabani na ongomnye, awucingi ukuba ziluncedo?
Sebenzisa iTuLotero kuyakuvumela ukuba wabelane ngetikiti kunye nabahlobo bakho ababhalisiweyo ngonqakrazo olunye, ngendlela efanayo naleyo soze ulahle itikiti lakho, Awuzukuyifihla itikiti lokuwina elixabisekileyo, kuya kwanela ukungena kwiTuLotero kuba itikiti linxulunyaniswe neselfowuni.
Njengesiqhelo, uya kuba nakho ukuqhubeka nokuthenga amatikiti akho, uthatha inxaxheba kumaqela kunye neeklabhu ngokukhawuleza, uyila amaqela afikelela kubantu abali-100 ukuba badlale kunye, belayisha ibhalansi kwelo qela kuthethwa ngalo. Ukongeza, i-TuLotero ikhuselekile kwi-100%, ukusukela oko ukubheja kusingathwa ngolawulo lwaseburhulumenteni lwenethiwekhi yeLotto kunye nokubheja, amatikiti akho ayafana nalawo athengwe ephepheni.
Ngale ndlela, ungahlawulisa amatikiti akho ngaphandle kwekhomishini kwaye kwangoko ngqo kwiakhawunti yakho yasebhankini, ukuze kungaziwa igama, elinye inyathelo lokhuselo eliza kuthathelwa ingqalelo. Ngaphezulu kwe-500 yeLottery yoLawulo lweSpanish sele inxulunyaniswa neTuLotero kwaye iya kukuvumela ukuba udlale amanani owathandayo ngokubhalisela kuwo ngokuzenzekelayo, kunye nokugunyazisa ulawulo lweLottery yeKrisimesi njengoko iinkampani ezinkulu sele zisenza.
Dlala kwiTuLotero kwaye ufumane i- € 1 SIMAHLA
Ukuba ubhalisa kwisicelo seTuLotero kwaye uthathe ithuba lokungena "Iphepha leendaba" Kwibhokisi "Ndinekhowudi" yobhaliso kwisicelo, Ngokuzenzekelayo uya kuba ne- € 1 ongayichitha kuhlobo lwe-lottery oyifunayo kuba iya kongezwa ngokuthe ngqo kwiakhawunti yakho yomsebenzisi. Ungakulibali ukufaka ikhowudi yakho kwaye usebenzise eli thuba likhethekileyo lokudlala simahla kwaye ke ukwazi ubunzulu bamava ngeTuLotero.
Ukongeza, ngoLwesine olandelayo, nge-4 kaJuni, ngo-2021 kukho iSuper Jackpot entsha yangoLwesihlanu omkhulu nge-130 yezigidi zeerandi kumvuzo wokuqala. Kwi-TuLotero sele benike ibhaso lokuqala lolu suku lukhethekileyo ngoSeptemba wonyaka ophelileyo ukusuka kolunye lolawulo lwe-500 olunxulunyaniswa neTuLotero, ngakumbi uLawulo 29 lweValladolid.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Izicelo » I-TuLotero isungula i-app yayo ekudala ilindelwe kuGoogle Play
I-Anker PowerConf C300, ikhamera yewebhu enobuchule kunye nesiphumo sobuchule